Fitbit yanga iriko kwemakore, yakagara pamusoro pebasa rayo rekutevera zviitiko, ichinyangadza ichitarisa sezvo vakwikwidzi vayo vanotarisira kukwidziridza mhando imwechete yekuziva chiziviso. Kune vazhinji, bhendi yekusimbisa muviri inongodaidzwa kunzi "Fitbit" - yakadaro ndiyo yakakanganiswa nekambani iyi - uye yave kutengwa neGoogle, kuwedzera pasimba rayo.
Takatyora yega yega yevaFitbit trackers, tichitarisa kuti imwe neimwe inodhura zvakadii, chii chinopa icho uye nei ungafunge nezve kutenga imwe neimwe. Iri rondedzero ndere nezvekubatsira iwe kuti uone kuti ndeipi Fitbit inoenderana newe uye mararamiro ako akanakisa.
Yakanakisisa yekugadziridza tracker: Yakanakisa chiitiko mabhendi kutenga nhasi
The Fitbit Kufuridzira ndiyo yakachipa pashoma yekutenderera mukupa kwaFitbit, kutsiva iyo zip, Flex uye Alta. Iyo inopa-zuva rose yekurara uye yekutevera yekutevera, zviziviso zve smartphone, zviso zvewachi uye tambo dzinochinjika. Iyo ine yekubata inobatika kuratidza, ndeyekushambira chiratidzo uye inopa otomatiki kurovedza kwemaonero zvakare.
The Fitbit Kufuridzira HR ine yakafanana chaizvo dhizaini yakagadzirirwa kukurudzira asi inowedzera kuyera kwemoyo kutarisa, yakanyanya kurara data, VO2 Max, Goal-based Exercise modes uye yakabatana GPS. Mamwe mabasa akafanana neExpire, asi ari kudhura zvishoma nekuda kwemamwe maficha.
The Fitbit Charge 3 inopa zvese zvinoitwa neInterant HR, zvinosanganisira kushambira kutsvaga uye Goal-based Exercise, asi inowedzerawo mamwe mafoni ekuzivisa paSamsung, seMhinduro dzinokurumidza dzevashandisi veApple, uye ine altimeter. Iko kune zvakare Special Edition modhi neNFC ye Fitbit Pay.
The Fitbit Charge 4 inovandudza iyo Fitbit Charge 3, inowedzera NFC seyakajairwa, inopa Spotify kudzora uye GPS, saka zviri nani pakunyatso kuteedzera mashandiro seyakazvimirira mudziyo.
The Fitbit Versa Lite Chinyorwa inofamba munzvimbo ye smartwatch, ichipa nzvimbo yepakati pakati peCharge 3 uye yakajairika Versa 2 smartwatch maererano nezvinhu nemutengo. Iyo Versa Lite Edition ine zvinhu zvakafanana neiyo Charge 3, kusanganisira kushambira kuongorora, asi inowedzera maapplication uye zvigadzirwa zvekugadzira. Iyo inorasikirwa neFitbit Pay zvisinei, pamwe chete neiyo altimeter.
The Fitbit Versa 2 ndiyo inotevera nhanho kumusoro kweiyo Fitbit smartwatch chikamu. Iyo inopa zvese zvinoenderana neVersa Lite Edition, asi iyo inowedzera iyo altimeter kumashure mukati, pamwe neFitbit Pay uye yakavakirwa-mu Alexa. Zvichakadaro hapana yakavakirwa muGPS, asi iyo Vhesa 2 ine mimhanzi isina-mimhanzi, izvo iyo Charge 3 neVena Lite Edition havaite.
The Fitbit Ionic ndiyo inonyanya kudhura yeFitbit mudziyo, zvakare nekuve iyo yakanyanya fanika kupfuma. Iyo inodzika yakawanda munzvimbo ye smartwatch kupfuura mamwe maFitbit zvishandiso, ichiunza yakavakwa-mukati meGPS, mvura inodzivisa kusvika pamamita makumi mashanu, mafoni ebhajari uye notisi yekuzivisa, pamwe nezvose zvinowanikwa pane zvimwe zvigadzirwa zveFitbit.
Izvo zvinoteedzera: Matanho, kureba, makalori, maminitsi anoshanda, kurara, hutano hwevakadzi
Type: Wrist-kupfeka kana clip-on ne accessory
Features: Kubata kweTypsera, wachi, kuwedzeredzwa kwema smartphone, mabhendi anoshandurwa, kudzivirira kwemvura, otomatiki yekuziva kurovedza muviri, kunyarara alarm
Battery: Kusvikira mazuva e5
Iyo Fitbit Inspire imwe yemidziyo miviri inotsiva iyo Zip, Flex uye Alta tracker mashure. Iyo yekupinda level yekusimba tracker kubva kuFitbit uye inopa ekutanga chiitiko chekutarisa, kusanganisira matanho nemakorori akapiswa, pamwe neyekutanga kurara kwekutsvaga.
Iko kune kuratidzwa kwezaziso zve smartphone uye pane-skrini dashibhodhi, inoratidza yakafanana metric kune izvo iwe zvaunowana mune yeFitbit app. Iyo Inspire inopawo kudzivirira mvura kusvika pamakumi mashanu emamita asi isingashambire kuteedzera, uye haina kukwirira kana moyo wekutarisa kana.
Iyo Inspire yakaderera, yakapfupika uye idiki pane iyo Charge 3. Inopawo tambo dzinochinjika, ichibvumira kutarisa kwakasiyana, pamwe nekugona kuimonera kuti ipfeke neiyo yakanyorwa, uye inonzi ine mazuva mashanu hupenyu hwebhatiri. Sezvinoita neese maFitbit zvishandiso, iyo Inspire inobatanidza kune iyo Fitbit app kuburikidza neBluetooth, ichipa huwandu hwerondedzero dzakawanda uye dhata.
Iyo Fitbit Inspire inouya mune maviri mavara anoumbwa neBlack uye Sangria.
Fitbit Kufuridzira kuongorora
Fitbit Kufuridzira HR
Izvo zvinoteedzera: Matanho, kureba, makoriyori, anoshanda maminetsi, kurara, moyo, VO2 Max, hutano hwevanhukadzi kutevedzera
Features: Kubata kumeso kwechivhoni, wachi, kuwedzeredzwa kwema smartphone, mabhendi anoshandurwa, GPS Yakabatana, kusawanikwa kwemvura nekushambira kutevedza, otomatiki kurovedza muviri kwekuziva, kufema kunotungamirirwa, chinangwa-chakavakirwa maitiro maitiro, ma alarm ekunyarara
Iyo Fitbit Inofuridzira HR inoratidzika dhizaini yakafanana neiyo Inspire, zvichireva kuti yakashoma uye yakashomeka mvura isina mudziyo inoratidzira neyekuzivisa kwe smartphone uye kufambira mberi.
Iyo inowedzera chiyero chemoyo yekutsvedza uye kushambira yekutevera kunyange, pamwe chete nebhuruu-yakafanana nebheji kune yakachengeteka kukurumidza kukurumidza uye inopa zvakare yakabatana GPS, Guided Breathing Septs, Goal-based Exercise Modes uye VO2 Max. Iyo Inspire HR inopawo yakawedzera nzira yekurara yekutevera data kupfuura iyo Inspire, kunyangwe ichiri kushomeka data yekukwirisa.
Iyo Inspire HR inouya nemhando nhatu dzinosanganisira Nhema, Lilac uye Dema neNhema. Kufanana neIfuridzo, ine mitsetse inoshanduka, zvakare.
Fitbit Kukurudzira HR kuongorora
Izvo zvinoteedzera: Matanho, kureba, makoriyori, anoshanda zone maminetsi, kurara, kurova kwemoyo, kukwidza, kumhanyisa, VO2 Max, SPO2, hutano hwechikadzi.
Features: OLED touchscreen kuratidza, wachi, yakawedzeredzwa smartphone zviziviso, inoshandurana mabhendi, GPS, kusanonwa mvura nekushambira kutevedza, mhando yemitambo yekutarisisa, otomatiki yekuziva kurovedza muviri, kutungamira kufema, chinangwa-chakavakirwa maitiro maitiro, ma alarm ekunyarara, NFC yekubhadhara mafoni, Spotify control
Battery: Kusvikira mazuva e7
Iyo Fitbit Charge 4 ndeyekuvandudza kune Fitbit Charge 3, inowedzera mumaviri ezvinyorwa zvitsva, hukuru hwayo ndehwunosanganisira GPS. Pakutanga iwe waifanira kushandisa iyo GPS pafoni yako, asi paCharge 4 iwe unogona ikozvino kuwana iyo yakananga kubva kune mudziyo, ichipa nzvimbo yekutarisa, kumhanya uye chinhambwe, pamwe nekukwidziridzwa kwakakwirira kubva kuartimeter.
Izvo zvinoita kuti ive irinani yekurovedza tracker yakazara seyakazvimirira mudziyo, zvirinani kupfuura iyo Inspire mamodheru kana iyo Charge 3. Iyo zvakare inowedzera muNFC kutsigira Fitbit Pay, chimwe chinhu chaimbove chaingowanikwa chete pane yakasarudzika edition Charge 3 mamodheru, saka zvinowedzera nyore . Kuwedzera kune zvirinani ndeye Spotify kutonga kunyangwe iwe usingakwanise kurodha mimhanzi kuchinhu ichi.
Bhatiri rakaverengerwa pamazuva manomwe, asi izvi pasina iyo GPS - iyo ine simba rakakura pahupenyu. Inoteedzera zviitiko zveGPS kusvika maawa mashanu, saka ichafukidza zviitiko zvakawanda senge 7 kana 5km inomhanya, asi haizofukidze chero chinhu chakareba - uye icho chinoshandisa yakawanda yehupenyu hwebhatiri.
Dzimwe dzese metric kubva muCharge 3 inosanganisirwa - kurara kwekutevera, nhanho uye zvichingodaro - asi Charge 4 yakaunzawo anoshanda zone maminetsi, ayo akagadzirirwa kutarisa mukusimudzira hutano hwemoyo kuburikidza nezvaunoita, zvisinei nematanho. Zviri nani kumira kupa mubairo zvakasiyana zviitiko pane kuvimba nematanho senge metric.
Fitbit Chja 4 wongororo
Izvo zvinoteedzera: Matanho, chinhambwe, makalori, anoshanda maminetsi, kurara, moyo, kusimudza, VO2 Max, SPO2, hutano hwevakadzi
Features: OLED touchscreen kuratidzira, wachi, yakawedzeredzwa smartphone zviziviso, inoshandurana mabhendi, Yakabatana GPS, isina mvura nekushambira tracking, emitambo-zhinji yekutevera, otomatiki yekuziva kurovedza muviri, kutungamira kufema, chinangwa-chakavakirwa maitiro maitiro, ma alarms akanyarara, NFC yemabhadhara efoni.
Iyo Fitbit Charge 3 ndiye mutsivi weCharge 2, achigadziridza nekugadzirisa magadzirirwo ayo, nepo achiwedzerawo kudzivirira mvura kusvika pamakumi mashanu emamita uye kushambira yekutevera, senge Inspire HR. Iko kune makumi mana muzana yakakura uye inopenya OLED inoratidzirwa ichienzaniswa neCharge 50 uye inobata-inogoneswa, pane kungobata-inogoneswa, ichibvumira vashandisi kusveta kuburikidza neese metric avanowana muFitbit app, kusanganisira hydration.
Zvese zveInspire HR maficha ari mubhodhi, kusanganisira Yakabatanidzwa GPS uye inoramba ichiita yekutarisisa kwemoyo, asi iwe unozowanawo mashoma ekuwedzera neCharge 3, inosanganisira kukwirisa dhata uye nesarudzo yeNFC-inogoneswa modhi.
Iyo Charge 3 zvakare ine Run Detect ine auto kumira, zvichireva kuti vamhanyi vanogona kumira pamwenje vasina manowuta kurova pa Workout yavo. Smartphone zviziviso zvakare zvishoma zvishoma kupfuura iyo Inokurudzira HR ine Kurumidza Kupindura kwevashandisi veApple.
Iyo Charge 3 inowanikwa mune mbiri dzakajairwa sarudzo dzeGrafite neRudzi dema kana Rose Goridhe ine Blue Grey tambo. Kune zvekare maviri eSpecial Edition emhando ayo ari NFC-inogoneswa, ichipa Fitbit Pay. Mhando dzeSpecial Edition dzine sarudzo dzakafanana asi iyo graphite ine chena yakanatswa machira emitambo, nepo goridhe rose riine mupendero wejira yepepuru.
Fitbit Chja 3 wongororo
Fitbit Versa Lite Chinyorwa
Izvo zvinoteedzera: Matanho, makorori, maminitsi anoshanda, kurara, moyo, VO2 Max, hutano hwevakadzi
Features: Yakavezwa LCD kuratidza, wachi, yakawedzeredzwa smartphone zviziviso, isina mvura nekushambira kutevedza, mhando yemitambo yekutarisisa, otomatiki yekurovedza muviri, kufema kwekutungamira, chinyararire maalarm, tambo dzinoshandurwa, GPS Yakabatana
Battery: Kusvikira mazuva e4
Iyo Fitbit Versa Lite Edition ndiyo nhanho yekutanga kubva kusimba tracker kuenda smartwatch muFitbit's portfolio. Iyo inopa akawanda eakafanana maficha seCharge 3, inosanganisira kudzivirira mvura, moyo wekutevera, nhanho dzekurara, kushambira yekutevera uye Yakabatana GPS, kunyangwe ichirasikirwa nedatha rekukwirira uye Fitbit Pay zvigone.
Iyo ine simba rekuisa mamwe mapato echitatu bato zvakadaro, chimwe chinhu chinoisa iyo parutivi neiyo Charge 3, uye zvakare inotaridzika zvakanyanya se wachi kwete pane chiitiko tracker. Pamusoro pezvo, iyo Versa Lite Edition inouya neyakagadzika mitambo senge mamwe maFitbit zvishandiso uye ine sarudzo yezvigadziriso zvemidziyo zvakare.
Iyo Versa Lite Edition inouya mune ina mavara, inosanganisira yeSilver Aluminium neiyo White, sirivha Aluminium ine Purple, Marina Blue Aluminium ine Marina Blue tambo uye Mulberry Aluminium ine Mulberry tambo.
Fitbit Versa Lite Edition wongororo
Izvo zvinoteedzera: Matanho, makorori, maminitsi anoshanda, kurara, moyo, kusimudzwa, hutano hwevakadzi, VO2 max,
Features: Yakavezwa AMOLED kuratidzwa, yakavakirwa-mu Alexa, wachi, yakawedzera smartphone ziviso, kudzora mimhanzi uye kuchengetwa, kusanonwa mvura nekushambira kutevedza, mhando dzemitambo yekutevera, otomatiki kurovedza kwekuziva, pa-screen Workouts, kudzidzisa wega, kutungamira kufema, NFC yemahara emahara, alarm yakanyarara, tambo dzinochinjika, Yakabatanidzwa GPS
Iyo Fitbit Versa 2 inhanho inokwira ichibva kuVersa Lite Edition, kunyangwe iri chikamu chemhuri imwechete, ichipa smartwatch iyo ine hupenyu hwakawanda uye isinganyatsoita zvemitambo kupfuura iyo Ionic (pazasi). Kufanana neVersa Lite Edition, iyo Versa 2, inopa simbi yemuviri isina mvura kusvika pamamirimita makumi mashanu nemakona akapoteredzwa uye kumashure, uye inouya netambo dzinochinjika.
Zvese zvimiro zvakafanana neVersa Lite Edition zviri mubhodhi, asi sezvaungatarisira, iyo Fitbit Versa 2 inopa vaviri vakanyanya kufananidzwa neLite muenzaniso. Izvi zvinosanganisira danho rekukwidza senge Charge 3, yakavakirwa-mukati Alexa, chengetedza mimhanzi, iyo Inogara iri pakuratidzwa modhi, Kurara Mode uye kutsigira Spotify.
Sezvo neLite modhi zvakadaro, iyo Versa ichiri kungopa Yakabatanidzwa GPS - iwe unozoda iyo Ionic kana iwe uchida yakavakirwa-mukati GPS kubva kuFitbit. Tsigiro yezviziviso zve smartphone, nekukurumidza kupindura rutsigiro rweAroid kuri mubhodhi kunyange, uye kune zvakare Fitbit Kubhadhara rutsigiro.
Iyo Fitbit Versa inouya mune mavara mashanu anosanganisira Carbon Aluminium neTambo yakasviba, Mist Grey Aluminium ine Stone tambo, kana Copper Rose Aluminium pamwe nePetal strap, Bordeaux strap kana Emerald tambo. Kune zvekare maviriSpecial Edition edhisheni anouya neese rakarukwa tambo uye yakasarudzika tambo.
Fitbit Versa 2 ongororo
Izvo zvinoteedzera: Matanho, chinhambwe, makoriyori, anoshanda maminetsi, kurara, moyo, kusimudza, VO2 Max
Features: Yakaratidzwa OLED kuratidzira, wachi, yakawedzera smartphone ziviso, kudzora mimhanzi uye kuchengetedza, GPS, kusawanirwa mvura nekushambira tracking, mitambo yemitambo yakawanda yekutsvaga, otomatiki yekuziva kurovedza muviri, pa-screen workouts, kudzidzisa wega, kutungamira kufema, NFC yekubhadhara nhare, alarm alarm, tambo dzinochinjika
Iyo Fitbit Ionic ndiyo mhinduro yekambani kune yakakodzera smartwatch uye ndiyo inodhura kwazvo Fitbit inowanikwa, asi iri zvakare rakanyanya kupfuma, ichipa zvese maficha anowanikwa pane anofarira ese ari maviri Charge 3 uye Versa 2 (kunze kweA Alexa), uku uchiwedzera zvimwe zvekuwedzera seyakavakirwa-GPS.
Inouya pamwe neaparty zokusebenza seStrava uye seVheya 2, inopa pa-screen Workouts. Ionic ine zvakare inochinjika tambo uye isina unibody yakagadzirwa kubva kuerospace aluminium yekutanga kutarisa.
Iyo Fitbit Ionic inonzi ine hupenyu hwemazuva mana ebhatiri uye inopa yakawedzerwa smartphone zviziviso zvekuisa zvirongwa zvakaita seFacebook, WhatsApp neGmail, sevamwe mhuri yeVersa, Inspire mhuri uye Charge 4 zvakare. Iyo Ionic inowanikwa mune matatu mavara, imwe neimwe inoenderana nemaviri ematehwe ematehwe uye matatu emitambo mabhendi anowanikwa zvakasiyana.
Fitbit Ionic ongororo
Fitbit Luxe ongororo: Fomu pamusoro pebasa
Akanakisa maFitbit smartwatches aunogona kutenga
Akanakisa maFitbit Versa mabhendi: Simudza yako fitness tracker netambo yezviitiko zvese